मंगलबार घटेको सुनको भाउ आज फेरि बढ्यो, तोलाको कति ? – Khabar Silo
काठमाडौं । आज साताको चौँथो दिन (बुधबार) सुनको भाउ पुनः उकालो लागेको छ। हिजो तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ आज फेरि तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेको हो ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार ४ सय रुपैयाँ तथा तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
हिजो (मंगलबार) छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार २ सय तथा तेजावी सुन प्रतितोला ६९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज सुनको भाउ बढेपनि चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ। आज चाँदी प्रतितोला ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।
आज कति छ विदेशी मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । आज बिहीबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको विनिमयदर स्थिर रहेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रिदर १३९ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर […]
Posted on August 7, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं- लगातार बढीरहेको सुनको मूल्य आज पनि बढेर नयाँ रेकर्ड बनेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा एक हजार रुपैयाँ बढेर प्रतितोला एक लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो तोलामा ११ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको एक लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण […]
सगरमाथाको फोहर पाँचतारे होटलमा !